Trump Oo la Sheegay Inuu ku Jeesjeesay Ciidamo Horay Ugu Soo Halgamay Mareykanka | Gaaroodi News
Trump Oo la Sheegay Inuu ku Jeesjeesay Ciidamo Horay Ugu Soo Halgamay Mareykanka
Hadal ka soo yeeray madaxweynaha mareykanka Donald trump uu ciidamada Mareykanka ee dagaallada lagu laayey ee qabuuraha ku jira uu ku tilmaamay “kuwo fashilmay oo laga guuleystay” ayaa si weyn looga soo horjeestay.
Koox lagu magacaabo VoteVetes waxay baahisay muuqaal ay ku jiraan qoysaska carruurtooda dagaallada lagu laayey, mid ka mid ah dadka muuqaalkaasi ku jirana wuxuu yiri “ma garaneysid waxa ay tahay naf huridda”.
Paul Rieckhoff oo ka mid ah geesiyada ka soo dagaallamay Ciraaq iyo Afghaanistaan wuxuu bartiisa tweetarka uu ku soo qray: “Runti tani yaa la yaabban?”.
Dadka falanqeeya siyaasadda Mareykanka waxay sheegeen hadalka Madaweynaha ka soo yeeray iney sabab u noqon karta dadka eheladooda dagaalka ay uga dhinteen iney codkooda siinin madaxweyne Trump.
Haddaba Trump muxuu yiri?
Sida uu qoray wargeyska ‘The Atlantic’ madaxweyne Trump booqasha uu 2018-kii ku tagi lahaa qabuuro ku yaalla Faransiiska oo ay ku aasan yihiin ciidamamada Mareykanka ayuu baajiyey isaga oo askarta qaburahaasi ku aasan ku tilmaamay ‘kuwo fashilmay’.
The Atlantic oo soo xigtay afar ila wareedyo waxay sheegtay Trump booqashadiisa Faransiiska inuu u baajiyey isaga oo askarta dagaallada lagu dilay oo uu booqdo ka door biday inuu roobka halkaasi ka da’aya timaha uusan ka halleyn, maadaamaa uu aaminsan yahay ciidamo dagaal lagu dilay xusitaankooda inuu qiima badan ku fadhiyin.
1800 askari oo Mareykanka u dhashay oo lagu dilay dagaalki koobaad ee addunka oo Jarmalka dagaal la galay iyaga oo gacan siinaya Faransiiska wuxuu ku tilmaamay ‘kuwo jilicsan’, ayuu yiri wargeyska the Atlantic. Askartaasi oo badankood lagu xusuusto guushi ay ka soo hoyeen dagaalki ay ciidamadaasi kala hortageen kuwi Jarmalka si ay magaalada paris u qabsanin.
Xilliga booqashada madaxweynaha la baajinayeyna aqalka cad ee Mareykanka wuxuu baaqashada u sababeeyey roobabka mahiigaanka ee halkaasi ka da’aya maadaamaa ay diyaaradda madaxweynaha u suuragaleyn iney roobab noocaasi ah ay ku dagto.
Ciidamada cirka dalka Mareykankana waxay sheegeen booqashada safarka madaxweynaha iney uga wacneed roobabka halkaasi ka da’aya awgood.
Wargeyska the Atlantic warbixinta uu daabacday ila wareedyada uu ka soo xigtay inkasta oo uu sheegin haddana Associted Press iyo Fox News waxay sheegeen ila wareedyada warbixinta wargeyska lagu sheegay qaarkood iney xaqiijiyeen.
Falcelinta noocee ayaa ka dhalatay?
Musharraxa Trump loollanka adag kula jira doorashada madaxweynanimada ee soo soctota Joe Biden wuxuu sheegay Trump inuu laheen karti uu ku hoggaamiyo dalka Mareykanka.
“Warbixintan haddii ay run noqoto, waxyaabihi uu madaxweynaha horay u sheegay inaga oo ka duuleyno, waa ceeb aad u weyn” ayuu yiri Joe Biden.
Xubin ka tirsan aqalka senetka oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo lagu magacaabo Tami Dackworth oo labadiisa lugood ku waayey dagaalka Ciraaq wuxuu sheegay “Trump inuu iskudayayo danahiisa inuu u adeegsado ciidamada Mareykanka”.
Warbixintan markay ay soo baxday kaddib dadka sida weyn u cambaareeyey madaxweyne Trump waxaa ka mid ah qaar ka mid ah askarta ciidanka Mareykanka horay uga tirsanaa.
“Ilmahaaga oo aad dagaal ku weydo xanuunka ay leedahay Trump ma dareemi karo, wiilkeygana wuxuu dhintay isaga oo dalkiisa si sharafleh u difaacayo” ayuu yiri mid ka mid ah waaliddiinta ay dagallada ubadkooda kaga dhinteen.
Trump arrintan muxuu ka yiri?
Madaxweyne Trump warbixintan wuxuu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin.
“Mushaar kordhin aan ciidamada horay looga sameyn ayaan u sameeyey, aniga oo arrimahaasi oo dhan sameeyey halyeeyadi dagaalka inaan hadal noocaasi ah ku yirahdo igama suuragaleyso. Waa warbixin laga xishooda oo ku soo baxday wargeys aan xishooneyn” ayuu yiri.
Trump oo shalay warbaahinta la hadlayey wuxuu sheegay xogtan inuu wargeysku ka helay John Kelly oo horay aqalka cad uga tirsanaa. Wuxuuna sheegy Trump John Kelly inuu culeyska shaqada uu u adkeysan waayey.
Wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo, Wasiirka gaashandhigga Mark Esper iyo Mick Mulvane waxay ka mid yihiin shaqsiyaadka sida weyn u difaacay ugana dooday inuu madaxweyne Trump hadal noocan ah uu ku hadleyn.